साढे तीन मेट्रिकटन बीउ उत्पादन
कार्तिक १७, रुकुम
रुकुममा साढे तीन मेट्रिकटन बीउ उत्पादन भएको छ । तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्र, चाँपाले एक वर्षमा साढे तीन मेट्रिकटन बढी तरकारी बीउ उत्पादन गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा मूल र उन्नत गरी तीन मेट्रिक टन ६ सय ८२ किलोग्राम बीउ उत्पादन गरेको तरकारी बीउ केन्द्र चाँपाले जानकारी दिएको छ ।
केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा एक मेट्रिक टन तीन सय किलो उन्नत बीउ उत्पादन गरेको जनाएको छ । विभिन्न आठ जातका तरकारीको उन्नत बीउ उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिसकेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले काउली, मुला, प्याज, सलगम, रायो, केराउ र गोलभेडाका विभिन्न जातका तरकारीको मूल बीउ उत्पादन गर्ने गरेको छ ।
त्यस्तै १५ उन्नत तरकारीका बीउ उत्पादन हुन्छन् । केन्द्रले केराउ सिंगापुरे, स्वीचाड, चम्चुर, सिमी चौमासे, सिमी त्रिशूली, सिमी बोटे कन्टुकी र गाजरको उन्नत बीउ उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यस्तै गोलभेडा मनप्रेक्स, धनियाँ, रामतोरिया भिन्डी, स्क्वास, भटमास, बोडी मालेपाटन जातको उन्नत बीउ पनि उत्पादन हुँदै आएको छ ।
केन्द्रका अनुसार खाद्यान्नतर्फ धान खुमल ४, कालो धान र मकै अरुण २ को पनि उन्नत बीउ उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ ।
जिल्लामा भित्र तथा बाहिरका कृषकलाई मध्यनजर गरेर तरकारी र खाद्यान्नको मूल तथा उन्नत बीउ उत्पादन गर्दै आएको केन्द्र प्रमुख वरिष्ठ बागबानी विकास अधिकृत डा. रवीन्द्रनाथ चौबेले बताउनुभयाे । ‘ उत्पादन गरिएको बीउ रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, दाङ, प्यूठान, रोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेत, अर्घाखाँची, रुपन्देहीलगायत जिल्लामा तरकारीको बीउ बिक्रीवितरण भइरहेको छ ।’ डा. चाैबेले भन्नुभयाे ।
केन्द्रले बीउको साथै तरकारीका बेर्नासमेत बिक्री गर्ने गरेको जनाएको छ । गत वर्षमात्रै दुई लाख ३५ हजार विभिन्न तरकारीका बेर्ना बिक्री गरिएको जनाएको छ । चौबेका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मूल, उन्नत बीउ र तरकारीका बेर्ना बिक्री गरेर १६ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा तीन हजार ९ सय ३४ किलो बीउ उत्पादन गरिएको थियो ।
वि.सं. २०३५ सालमा समशीतोष्ण तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्रको नामबाट केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । एक सय १७ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको केन्द्रको केही क्षेत्रफलमा तरकारीको बीउ उत्पादन हुँदैन । सडक, भवन लगायत कारणले केही भूभागमा तरकारीको बीउ उत्पादन नहुने केन्द्रले जनाएको छ । रुकुममा उत्पादन गरिएको बीउहरु गुणस्तरिय हुने भएका कारण नेपालका साथै छिमेकी देश भारत, श्रीलंका लगायतका देशमा समेत अत्याधिक माग हुने गरेको छ ।